DHEGAYSO: Cosoble “Dekedda Ceel Macaan waxay u shaqeyn doontaa sida Dekedda Boosaaso iyo Kismaayo”. | Entertainment and News Site
Home » News » DHEGAYSO: Cosoble “Dekedda Ceel Macaan waxay u shaqeyn doontaa sida Dekedda Boosaaso iyo Kismaayo”.
DHEGAYSO: Cosoble “Dekedda Ceel Macaan waxay u shaqeyn doontaa sida Dekedda Boosaaso iyo Kismaayo”.
daajis.com:- Madaxweynaha Maamulka Hirshabeelle Cali C/llaahi Cosoble ayaa shalay soo gaaray magaalada Muqdisho, iyadoo uu sii xoogeyanayo xiisada u dhaxeysa maamulkiisa iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya, kaddib markii uu dhowaan eedeyn u jeediyay dowladda Federaalka.
HALKAN KA DHEGAYSO COSOBLE